စျေးနှုန်းသက်သာသော တရုတ်လက်ကား Monocrystalline Half Cell Solar PV - Rixing Electronics
QJ SOLAR သည် 25 နှစ်အာမခံဖြင့် Monocrystalline half cell ဆိုလာ PV ကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် photovoltaic ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါသည်၊ QJ နေရောင်ခြည်သည် လှပသော Hangzhou Bay-CIXI မြို့၊ Ningbo၊ နင်ဘိုဆိပ်ကမ်းမှ ကီလိုမီတာ 120 အကွာတွင် တည်ရှိပြီး ဗျူဟာမြောက်၊ သွားလာရေး အဆင်ပြေသော တည်နေရာ၊ QJ ဆိုလာသည် သုတေသန၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောင်းချမှုတို့တွင် ၂၀၀၄ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
Monocrystalline Half cell solar PV ၏ အားသာချက်များကား အဘယ်နည်း။
2. အရိပ်သက်ရောက်မှုကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် ပါဝါဆုံးရှုံးမှုကို လျော့နည်းစေသည်။
3.Competitive low light စွမ်းဆောင်ရည်။
4. လျှော့စျေး BOS နှင့် တိုးတက်သော ROI ဖြင့် အသုံးဝင်မှုနှင့် စီးပွားဖြစ်စကေးပရောဂျက်များအတွက် စံပြရွေးချယ်မှု။
Monocrystalline Half Cell ဆိုလာ PV ကို အိမ်၊ ခြံ၊ စီးပွားရေး အဆောက်အဦး၊ ဆေးရုံ၊ ကျောင်း၊ စက်ရုံ...
Rixing Electronics သည် စတော့တွင်ရရှိနိုင်သော Monocrystalline Half Cell Solar PV ကို အဓိကအားဖြင့် ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Monocrystalline Half Cell Solar PV ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော 31 နှစ်ကစတင်တည်ထောင်ကတည်းက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်များကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သော ထုတ်ကုန်များသည် စျေးသက်သက်သာသာသာမက တာရှည်ခံပြီး ထိရောက်မှုလည်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် CE နှင့် TUV အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားပြီး 25 နှစ်အာမခံပါရှိပြီးအရည်အသွေးကိုအာမခံပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် grid photovoltaic စနစ်များနှင့် grid photovoltaic စနစ်များကို လက်ကား သို့မဟုတ် အစုလိုက် ဝယ်ယူပါက၊ သင့်အား စျေးနှုန်းချိုသာစွာ ပေးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် နောက်ဆုံးပေါ်ရောင်းအား၊ အဆင့်မြင့်ပြီး သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်နှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုလည်း စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး သင့်အား စျေးနှုန်းစာရင်းတစ်ခုပေးပါမည်။